၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (3 of 8) – Dhamma Training Center
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (3 of 8)
၁၈- မဂ္ဂပစ္စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (3 of 8) zawgyi
၁။ မဂ္ဂင် = မဂ္ဂ =လမ်း = Path, Way
မဂ္ဂင် (၈)ပါးကို လူသိများပါသော်လည်း ပဋ္ဌာန်းမဂ္ဂပစ္စည်း မဂ္ဂင်င်္ဂါနိမှာ မဂ္ဂင် -၁၂ ပါးရပါတယ်။
ကောင်းတဲ့မဂ္ဂင် (၈) ပါး နိဗ္ဗာန်သွားလမ်း ၊ မကောင်းတဲ့ မဂ္ဂင် (၄)ပါး အပါယ်သွားလမ်း။
သတိက မိစ္ဆာသတိ မရှိပါ ဒါကြောင့် တရားကိုယ် – ၉ ပါး ပဲရသော်လည်း မဂ္ဂင် – ၁၂ ပါးရတယ်။
ပညာမဂ္ဂင် (၂) ပါး
၁။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ (Right View, Right Understood) = ကောင်းစွာသိမြင်မှု ပညာစေတသိက်
၂။ သမ္မာသင်္ကပ္ပ (Right thought) = ကောင်းစွာ ကြံစည်မှု ဝိတက်စေတသိက်
သီလမဂ္ဂင် (၃) ပါး ဝိရတိစေတသိက်
၃။ သမ္မာဝါစာ (Right speech) = ကောင်းစွာပြောဆိုမှု
၄။ သမ္မာကမ္မန္တ (Right action) = ကောင်းစွာပြုလုပ်မှု
၅။ သမ္မာအာဇီဝ (Right livelihood) = ကောင်းစွာ အသက်မွေးမှု
မိစ္ဆာဝါစာ = လိမ်ညာတဲ့စကား။ ဂုံးချောတဲ့စကား။ ကြမ်းတမ်းတဲ့စကား။ ပိန်ဖျင်းတဲ့စကား ‌လေးပါ။
မိစ္ဆာကမ္မန္တ = သတ် ခိုး ကာမ ဤသုံးဝ
မိစ္ဆာအာဇီဝ = လိမ်ညာ။ ဂုံးချော။ ကြမ်းထမ်း။ ပိန်ဖျင်းတဲ့စကားတွေနှင့် စီးပွားမရှာနဲ့။
သတ် ခိုး ကာမ ဤသုံးဝနှင့်လည်း စီးပွားမရှာနဲ့။
ဒေသနာတော်လာ — အဆိပ်။ လက်နက်။ မူးယစ်ဆေး။ အသားရောင်း။ လူကုန်ကူးခြင်းတွေနှင့်လည်း စီးပွားမရှာနဲ့ ။ စုစုပေါင်း (မိစ္ဆာဝါစာ ၄ + မိစ္ဆာကမ္မန္တ ၃ + ၅= ၁၂ ပါး)
သမာဓိမဂ္ဂင် (၃) ပါး
၆။ သမ္မာဝါယမ (Right effort) = ကောင်းစွာ အားထုတ်မှု ဝီရိယစေတသိက်
၇။ သမ္မာသတိ (Right mindfulness) = ကောင်းစွာ အောက်မေ့မှု သတိစေတသိက်
၈။ သမ္မာသမာဓိ (Right concentration) = ကောင်းစွာ တည်ကြည်မှု ဧကဂ္ဂတာစေတသိက်
၂။ မိစ္ဆာမဂ္ဂင် လမ်းအမှား (၄)ပါး.
၉။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ (wrong View, Wrong Understood) မှားယွင်းစွာသိမြင်မှု ဒိဋ္ဌိစေတသိက်
၁၀။ မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ (wrong thought) = မှားယွင်းစွာ ကြံစည်မှု ဝိတက်စေတသိက်*အကု
၁၁။ မိစ္ဆာဝါယမ (wrong effort) = မှားယွင်းစွာအားထုတ်မှု ဝီရိယ * အကု
၁၂။ မိစ္ဆာသမာဓိ (wrong concentration) = မှားယွင်းစွာ တည်ကြည်မ ဧကဂ္ဂတာ * အကု
၃။ ပဉ္စင်္ဂိကမဂ်နှင့် အဋ္ဌင်္ဂိကမဂ်
သမ္မာဒိဋ္ဌိ သမ္မာသင်္ကပ္ပ သမ္မာဝါယမ သမ္မာသတိ သမ္မာသမာဓိက တရားအားထုတ်တဲ့ အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ကာရကမဂ္ဂင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နည်းထပ်ပြောရရင် ဝိပဿနာဉာဏ်တွေ ပေါ်ဖြစ်စေတဲ့ အထိ အလုပ်လုပ်ပေးတဲ့ အလုပ်သမား မဂ္ဂင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာဝါစာ၊ သမ္မာကမ္မန္တ၊ သမ္မာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ သီလမဂ္ဂင်သုံးပါးက သမ္မာဒိဋ္ဌိ စသည်တို့ကို ဖြစ်စေတဲ့ ကာရာပကမဂ္ဂင် ဖြစ်တယ်။ အမှားအမှန်ကို ပိုင်းပိုင်း ခြားခြား သိတာက သမ္မာဒိဋ္ဌိ။ ဆင်ခြင် တွေးတောပေးနေတာက သမ္မာသင်္ကပ္ပ။ တရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာမှာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်တာ သမ္မာဝါယမ။ စိတ်စိုက်ပေးတာက သမ္မာသတိ။ မကောင်းတဲ့ အကုစိတ်မှာယှဉ်တဲ့ သတိ မရှိပါ။ စိတ်ကို အာရုံတစ်ခုမှာ စူးစိုက်တည်စေတာက သမ္မာသမာဓိ။ ဒီမဂ္ဂင်ငါးပါးက အလုပ်လုပ်တာပါ။ ကိုယ်ကျင့် သီလဆိုင်ရာ မဂ္ဂင် ၅-ပါးက ဉာဏ်ပညာပေါ်လာဖို့ ပံ့ပိုးအားဖြည့် ပေးနေတာ။ အထောက်အပံ့ ပေးနေ တာပါ။ ဉာဏ်ပညာပေါ်ဖို့။ သမ္မာဒိဋ္ဌိမှာ လမ်းဆုံးဖို့ပါ။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပ မိစ္ဆာဝါယမ မိစ္ဆာသမာဓိ တွေကလည်း မှားယွင်းတဲ့အတွေး မှားယွင်းတဲ့အသိအမြင်ရှိတဲ့ သူက မှားတာတွေပဲ လုပ်နေ ပြောနေ လုံ့လ စိုက်ထုတ် နေတော့မယ်။ (ကျမ်းညွှန်း ပါချုပ်- ၃၄၀)
၄။ ရဟန်းသီလကို ဆင်ခြင်၍ဖြစ်လာသည့် ပီတိကို ၀ိပဿနာ ရှုပွားတော်မူသည်
ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကာလ သာဝတ္ထိပြည်တွင် တိဿဟု အမည်ရှိသည့် သူဋ္ဌေးသား ရှိလေ၏။ သူသည် မြတ်စွာဘုရားထံတော်ပါးမှ တရားတော်များကို နာကြားရသဖြင့် ကုဋေလေးဆယ်သော ရွှေငွေတို့ကို ညီဖြစ်သူအား ပေးစွန့်လွှတ် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာသနာတော်တွင် ရဟန်းပြုခဲ့ပါသည်။ ငါးဝါရပြီးနောက် လူသူ ဝေးသည့် တောအရပ်တွင် သင်္ခန်းကျောင်းကလေးဖြင့် သီတင်းသုံးတော်မူလေသည်။
တိဿမထေရ်၏ ခယ်မ (ညီ၏ဇနီး) သည် တိဿမထေရ် သာသနာတော်တွင် ပျော်မွေ့ခြင်းမရှိဘဲ တစ်နေ့နေ့လူထွက်လာပါက သူရထားသည့် ပစ္စည်းဥစ္စာများကို ခွဲဝေပေးရမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြနေ၏။ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်စီတွင် ဂိုဏ်းသားတစ်ရာစီရှိသည့် လူဆိုးကြီးငါးဦးတို့ကို ခေါ်ကာ တိဿမထေရ်အား အဆုံးစီရင်ရန် စရံငွေများပေးချေကာ စေခိုင်းလေသည်။ ရဟန်းသီလ စင်ကြယ်စွာဖြင့် တရားဘာဝနာ ရှုပွား နေသည့် တိဿမထေရ်မြတ်ကို သတ်ဖြတ်ရန် လူဆိုးကြီးငါးရာတို့လည်း တောသို့ သွားကြလေသည်။
၅။ ကျောက်တုံးဖြင့် ပေါင်ကို ချိုးတော်မူသည်
တိဿမထေရ်ရှိရာသို့ လူဆိုးကြီးများ ရောက်လာသည့်အခါ မထေရ်က အဘယ်ကြောင့် ရောက်လာ သနည်းဟုမေးရာ လူဆိုးကြီးများကလည်း အရှင်ဘုရား၏ ခယ်မက စေခိုင်းခြင်းကြောင့် ယခုသတ်ဖြတ်ရန် ရောက်လာခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြော၏။ ထိုအခါ မထေရ်မြတ်သည် လူဆိုးကြီးများအား မိမိအား ယနေ့တစ်ည မသတ်ရန် ပြောပြီး မိမိထွက်ပြေးမည်မဟုတ်ကြောင်း သက်သေထားသည့်အနေဖြင့် မိမိ၏ ပေါင်ရိုးနှစ်ချောင်းကို ကျောက်တုံးဖြင့် ထုချိုးလေ၏။ ထိုအခါ လူဆိုးကြီးများလည်း စိတ်ချလက်ချဖြင့် စင်္ကြံန်းလမ်းတစ်နေရာ၌ မီးဖို၍ အိပ်ကြလေသည်။
မထေရ်မြတ်သည် ပေါင်ကျိုးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဒုက္ခဝေဒနာကို ဖယ်ခွာ၍ မိမိ၏ ရဟန်း ဖြစ်သည်မှ ယနေ့တိုင် စောင့်ထိန်းလာခဲ့သည့် သီလ၏ အစွန်းအထင်းမရှိ စင်ကြယ်မှုကို ဆင်ခြင်တော်မူသည့် အခါ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်မှုပီတိများ ဖြစ်လာ၏။ ထို့နောက် ဘုရားရှင်ထံတော်ပါးမှ သင်ယူလာခဲ့သည့် ၀ိပဿနာ တရားကို ပွားများရာ အရုဏ်တက်ချိန်တွင် အရဟတ္တဖိုလ်သို့ရောက်ကာ ရဟန္တာဖြစ်တော်မူလေသည်။
၆။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၏ အမည်ကွဲများ
Middle way. = မဇ္ဇိမပဋိပဒါ အလယ်လမ်း
Noble practice = ဗြဟ္မစရိယ
Deathless path. = အမတဂါမိမဂ္ဂ
Ever truth. = သမ္မတ္တ
၇။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
၁- ကမ္မဿကထာ သမ္မာဒိဋ္ဌိ = ကံနှင့် ကံအကျိုးကို ကောင်းစွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်
၂- ၀ိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိ = သခါင်္ရတရားတို့ရဲ့ မမြဲတဲ့သဘော မခိုင်ခန့်တဲ့သဘော အစိုးမရတဲ့ သဘောကို သိမြင်တဲ့ဉာဏ်
၃- သစ္စာနုလောမိကသမ္မာဒိဋ္ဌိ = သစ္စာလေးပါးအား လျှော်စွာသိမြင်တဲ့ဉာဏ်အပြင် ဈာနသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ မဂ္ဂသမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ ဖလသမ္မာဒိဋ္ဌိ တွေရှိပါတယ်။
၈။ အတ္တဒိဋ္ဌိနှင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ကမ္မဿကတသမ္မာဒိဋ္ဌိ
အတ္တဒိဋ္ဌိသမားက မရှိတဲ့ ၀ိညာဉ် လိပ်ပြာ အတ္တကို ရှိတယ်လို့ ယူဆတယ်။ သိတာတော့ မဟုတ်ဘူး။ သင်္ခါရ တရားတွေရဲ့ သဘောအမှန်ဖြစ်တဲ့ ပေါ်ပြီးပျောက်၊ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး ချုပ်နေတဲ့ မတည်တံ့ မခိုင်ခံ့တဲ့ သဘောအမှန်ကို ၀ိပဿနာဉာဏ်နှင့် သိမြင် သဘောပေါက်လာတဲ့ ယောဂီက ၀ိဉာဉ်လိပ်ပြာ အတ္တကို မယူ တော့ဘူး။ သူသဘောပေါက်ပြီ၊ သူသိသင့်သလောက် သိထားပြီ၊ ဒါကြောင့်သူ အတ္တဒိဋ္ဌကကနေ တဒင်္ဂချင်း လွန်မြောက်နေပါတယ်။
သက္ကာယဒိဋ္ဌိသမားက ထင်ရှားရှိတဲ့ ကိုယ်ကောင်ကြီးကို ငါ သူတစ်ပါး အဖြစ် ခံယူလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါက ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ မွေးရာပါ ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါတယ်။ ၀ိပဿနာ တရားအဆင့်အတန်း တစ်ခုကိုရောက်သွားရင် ငါ သူတစ်ပါး ယောင်္ကျား မိန်းမ ဆိုတာ အပြောသင်္ကေတမျှသာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်အမှန် အရှိတရားက ရုပ်နာမ်အစုသာပဲ သဘောပေါက်လာသူအဖို့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ ကင်းစင်သွားပါတယ်။ လောကဝေါဟာရအရ ငါ သူတစ်ပါး အပြောကို တော့ ပြောနေပေလိမ့်မယ် ဒါက လောက သတ်မှတ်ချက်မျှသာ ဖြစ်ပေတယ်ဆိုတဲ့ အမှန်တရားကို နားလည် လာသူအဖို့ သက္ကာယဒိဋ္ဌိကနေ လွတ်မြောက်ပါတယ်။ ကံနှင့်ကံအကျိုးကို သိမြင်နားလည်လာတဲ့ သူတော် ကောင်းအဖို့ နတ္ထိကဒိဋ္ဌိ အဟေတုကဒိဋ္ဌိ အကိရိယဒိဋ္ဌိတွေကနေ လွန်မြောက်ပါတယ်။
၉။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်း မဂ္ဂင်ထိုက်တယ်
သမ္မာဒိဋ္ဌိ၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ သမ္မာဝါယမ၊ သမ္မာသတိ၊ သမ္မာသမာဓိ တွေက တရားအားထုတ်ရာမှာ ပါရမယ်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိလား၊ သမ္မာသင်္ကပ္ပလား၊ သမ္မာဝါယမလား၊ သမ္မာသတိလား၊ သမ္မာသမာဓိလားဆိုတာ စာနှင့် မသိသူ ဖြစ်စေ တရားအားထုတ်တဲ့ လမ်းကြောင်းမှန်နေရင် ဒီ မဂ္ဂင် ၅-ပါးက ပါတယ်။ သီလ၀ိသုဒ္ဓိက ကနဦးဖြစ်ပြီးသားမို့ သီလမဂ္ဂင်ကို မပြသော်လည်း ပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ သစ္စာလေးပါးသိဖို့ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးလုံး လိုပါတယ်။ မိစ္ဆာ ဒိဋ္ဌိကလည်း မဂ္ဂင်ထိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် အပါယ်ဘုံကိုသွားရာ လမ်းကြောင်းဖြစ်လို့ပါပဲ။
၁၀။ ပဋ္ဌာန်းထဲက မဂ္ဂပစ္စည်းမှာ သမ္မာနှင့် မိစ္ဆာရှိ
ပဋ္ဌာန်းမှာလာတဲ့ မဂ္ဂပစ္စယောကို သာမာန်အားဖြင့် ယူရိုး ယူစဉ် မဂ္ဂင်းရှစ်ပါး မယူရပါဘူး။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးက နိဗ္ဗာန်ကို သွားတဲ့လမ်း။ ပဋ္ဌာန်းထဲက မဂ္ဂက နိဗ္ဗာန် အပါအ၀င် သုဂတိဋ္ဌာန သွားတဲ့လမ်းရှိတယ်၊ ဒုဂ္ဂတိဋ္ဌာနကို သွားတဲ့ လမ်းလည်းရှိတယ်။
မဂ္ဂသမ္ပယုတ္တကာနံ ဓမ္မာနံ တံသမုဋ္ဌာနာနဉ္စ ရူပါနံ မဂ္ဂပစ္စယေန ပစ္စယော။
အဲဒီ သဘာဝတရားတွေက လမ်းကြောင်း အနေနှင့်ဖြစ်ပြီး သူတို့နှင့် ယှဉ်တွဲလာတဲ့ သဘာဝတရားတွေကိုလည်း သူတို့နည်းတူ ဖြစ်ဖို့ရာ ကျေးဇူးပြုတယ်။ ဖြစ်စေတယ်။ ဥပမာပြရရင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ wrong understood ကသူနှင့်ယှဉ်တွဲဖြစ်တဲ့ စိတ် စေတသိက် စိတ္တဇရုပ် အားလုံးကို မှားယွင်းတဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်ကို တင်ပေးလိုက် တယ်။ ဒါကြောင့် တွေးရင်လည်း တစ်လွဲ၊ ပြောရင်လည်း တစ်လွဲ၊ လုပ်ရင်လည်း တစ်လွဲ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိက ကျေးဇူးပြုလို့ပါ။ ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်း အခုအတိုင်းပဲ တွေ့ရပါမယ်။ သမ္မာဒိဋ္ဌိ Right understood ဖြစ်ပြီဆိုတာနှင့်အတွေးမှန်ပြီ သမ္မာသင်္ကပ္ပ၊ အပြောမှန်ပြီ အလုပ်မှန်ပြီ သမ္မာပဋ္ဌာန် လုံလ၀ီရိယ မှန်ပြီ စူးစိုက်မှုမှန်ပြီဒါကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိက ကျေးဇူးပြုတာပါ။ (ကျမ်းညွှန်း ပါချုပ်ဆရာတော် ပဋ္ဌာန်း)
မဂ္ဂပစ္စည်းရဲ့ သင်္ချာ သတ္တ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဟေတု၊ အာဟာရ၊ ကမ္မ၊ ဣနြ္ဒိယ နှင့် ဈာနပစ္စည်းတို့နှင့် သင်္ချာ တူပါတယ်။
မဂ္ဂအဓိပ္ပါယ်က “ကိလေသေ မာရေန္တော နိဗ္ဗာနံ ဂစ္ဆတီတိ မဂ္ဂေါ” လောဘ ဒေါသ ကိလေသာကို သတ်ပြီး နိဗ္ဗာန်ကို သွားတတ်လို့ မဂ္ဂမည်ပါတယ်။
“သီလပရိဘာဝိတော သမာဓိ မဟပ္ဖလော ဟောတိ မဟာနိသံသော” သီလကိုအခြေခံပြီး ပွားများတဲ့ သမာဓိ အကျင့်သည်သာလျှင် အကျိုးအာနိသင် စွမ်းရည် ထက်မြက်တယ်။
သီလ သမာဓိ ပညာက ပဋိပတ္တိကမ္မပညာ သီလ သမာဓိက ဒေသနာက္ကမ ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈- မဂ်ဂပစ်စယော- Magga Paccayo (Path condition) file (3 of 8) pyidaungsu – unicode
၁။ မဂ်ဂငျ = မဂ်ဂ =လမျး = Path, Way
မဂ်ဂငျ (၈)ပါးကို လူသိမြားပါသျောလညျး ပဋ်ဌာနျးမဂ်ဂပစ်စညျး မဂ်ဂငျင်ျဂါနိမှာ မဂ်ဂငျ -၁၂ ပါးရပါတယျ။
ကောငျးတဲ့မဂ်ဂငျ (၈) ပါး နိဗ်ဗာနျသှားလမျး ၊ မကောငျးတဲ့ မဂ်ဂငျ (၄)ပါး အပါယျသှားလမျး။
သတိက မိစ်ဆာသတိ မရှိပါ ဒါကွောငျ့ တရားကိုယျ – ၉ ပါး ပဲရသျောလညျး မဂ်ဂငျ – ၁၂ ပါးရတယျ။
ပညာမဂ်ဂငျ (၂) ပါး
၁။ သမ်မာဒိဋ်ဌိ (Right View, Right Understood) = ကောငျးစှာသိမွငျမှု ပညာစတေသိကျ
၂။ သမ်မာသင်ျကပ်ပ (Right thought) = ကောငျးစှာ ကွံစညျမှု ဝိတကျစတေသိကျ
သီလမဂ်ဂငျ (၃) ပါး ဝိရတိစတေသိကျ
၃။ သမ်မာဝါစာ (Right speech) = ကောငျးစှာပွောဆိုမှု
၄။ သမ်မာကမ်မန်တ (Right action) = ကောငျးစှာပွုလုပျမှု
၅။ သမ်မာအာဇီဝ (Right livelihood) = ကောငျးစှာ အသကျမှေးမှု
မိစ်ဆာဝါစာ = လိမျညာတဲ့စကား။ ဂုံးခြောတဲ့စကား။ ကွမျးတမျးတဲ့စကား။ ပိနျဖငျြးတဲ့စကား ‌လေးပါ။
မိစ်ဆာကမ်မန်တ = သတျ ခိုး ကာမ ဤသုံးဝ
မိစ်ဆာအာဇီဝ = လိမျညာ။ ဂုံးခြော။ ကွမျးထမျး။ ပိနျဖငျြးတဲ့စကားတှနှေငျ့ စီးပှားမရှာနဲ့။
သတျ ခိုး ကာမ ဤသုံးဝနှငျ့လညျး စီးပှားမရှာနဲ့။
ဒသေနာတျောလာ — အဆိပျ။ လကျနကျ။ မူးယဈဆေး။ အသားရောငျး။ လူကုနျကူးခွငျးတှနှေငျ့လညျး စီးပှားမရှာနဲ့ ။ စုစုပေါငျး (မိစ်ဆာဝါစာ ၄ + မိစ်ဆာကမ်မန်တ ၃ + ၅= ၁၂ ပါး)
သမာဓိမဂ်ဂငျ (၃) ပါး
၆။ သမ်မာဝါယမ (Right effort) = ကောငျးစှာ အားထုတျမှု ဝီရိယစတေသိကျ
၇။ သမ်မာသတိ (Right mindfulness) = ကောငျးစှာ အောကျမမှေု့ သတိစတေသိကျ
၈။ သမ်မာသမာဓိ (Right concentration) = ကောငျးစှာ တညျကွညျမှု ဧကဂ်ဂတာစတေသိကျ
၂။ မိစ်ဆာမဂ်ဂငျ လမျးအမှား (၄)ပါး.
၉။ မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိ (wrong View, Wrong Understood) မှားယှငျးစှာသိမွငျမှု ဒိဋ်ဌိစတေသိကျ
၁၀။ မိစ်ဆာသင်ျကပ်ပ (wrong thought) = မှားယှငျးစှာ ကွံစညျမှု ဝိတကျစတေသိကျ*အကု
၁၁။ မိစ်ဆာဝါယမ (wrong effort) = မှားယှငျးစှာအားထုတျမှု ဝီရိယ * အကု
၁၂။ မိစ်ဆာသမာဓိ (wrong concentration) = မှားယှငျးစှာ တညျကွညျမ ဧကဂ်ဂတာ * အကု
၃။ ပဉ်စင်ျဂိကမဂျနှငျ့ အဋ်ဌင်ျဂိကမဂျ
သမ်မာဒိဋ်ဌိ သမ်မာသင်ျကပ်ပ သမ်မာဝါယမ သမ်မာသတိ သမ်မာသမာဓိက တရားအားထုတျတဲ့ အလုပျကို ကိုယျတိုငျလုပျတဲ့ ကာရကမဂ်ဂငျတှေ ဖွဈပါတယျ။ တဈနညျးထပျပွောရရငျ ဝိပဿနာဉာဏျတှေ ပျေါဖွဈစတေဲ့ အထိ အလုပျလုပျပေးတဲ့ အလုပျသမား မဂ်ဂငျတှေ ဖွဈပါတယျ။ သမ်မာဝါစာ၊ သမ်မာကမ်မန်တ၊ သမ်မာအာဇီဝ ဆိုတဲ့ သီလမဂ်ဂငျသုံးပါးက သမ်မာဒိဋ်ဌိ စသညျတို့ကို ဖွဈစတေဲ့ ကာရာပကမဂ်ဂငျ ဖွဈတယျ။ အမှားအမှနျကို ပိုငျးပိုငျး ခွားခွား သိတာက သမ်မာဒိဋ်ဌိ။ ဆငျခွငျ တှေးတောပေးနတောက သမ်မာသင်ျကပ်ပ။ တရားအားထုတျတယျဆိုတာမှာ ကွိုးပမျးအားထုတျတာ သမ်မာဝါယမ။ စိတျစိုကျပေးတာက သမ်မာသတိ။ မကောငျးတဲ့ အကုစိတျမှာယှဉျတဲ့ သတိ မရှိပါ။ စိတျကို အာရုံတဈခုမှာ စူးစိုကျတညျစတောက သမ်မာသမာဓိ။ ဒီမဂ်ဂငျငါးပါးက အလုပျလုပျတာပါ။ ကိုယျကငျြ့ သီလဆိုငျရာ မဂ်ဂငျ ၅-ပါးက ဉာဏျပညာပျေါလာဖို့ ပံ့ပိုးအားဖွညျ့ ပေးနတော။ အထောကျအပံ့ ပေးနေ တာပါ။ ဉာဏျပညာပျေါဖို့။ သမ်မာဒိဋ်ဌိမှာ လမျးဆုံးဖို့ပါ။ မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိ မိစ်ဆာသင်ျကပ်ပ မိစ်ဆာဝါယမ မိစ်ဆာသမာဓိ တှကေလညျး မှားယှငျးတဲ့အတှေး မှားယှငျးတဲ့အသိအမွငျရှိတဲ့ သူက မှားတာတှပေဲ လုပျနေ ပွောနေ လုံ့လ စိုကျထုတျ နတေော့မယျ။ (ကမျြးညှနျး ပါခြုပျ- ၃၄၀)
၄။ ရဟနျးသီလကို ဆငျခွငျ၍ဖွဈလာသညျ့ ပီတိကို ဝိပဿနာ ရှုပှားတျောမူသညျ
ဘုရားရှငျလကျထကျတျောကာလ သာဝတ်ထိပွညျတှငျ တိဿဟု အမညျရှိသညျ့ သူဋ်ဌေးသား ရှိလေ၏။ သူသညျ မွတျစှာဘုရားထံတျောပါးမှ တရားတျောမြားကို နာကွားရသဖွငျ့ ကုဋလေေးဆယျသော ရှငှေတေို့ကို ညီဖွဈသူအား ပေးစှနျ့လှတျ မွတျစှာဘုရားရှငျ၏ သာသနာတျောတှငျ ရဟနျးပွုခဲ့ပါသညျ။ ငါးဝါရပွီးနောကျ လူသူ ဝေးသညျ့ တောအရပျတှငျ သင်ျခနျးကြောငျးကလေးဖွငျ့ သီတငျးသုံးတျောမူလသေညျ။
တိဿမထရျေ၏ ခယျမ (ညီ၏ဇနီး) သညျ တိဿမထရျေ သာသနာတျောတှငျ ပြျောမှခွေ့ငျးမရှိဘဲ တဈနနေ့လေူ့ထှကျလာပါက သူရထားသညျ့ ပစ်စညျးဥစ်စာမြားကို ခှဲဝပေေးရမညျကို စိုးရိမျကွောငျ့ကွနေ၏။ ထို့ကွောငျ့ တဈယောကျစီတှငျ ဂိုဏျးသားတဈရာစီရှိသညျ့ လူဆိုးကွီးငါးဦးတို့ကို ချေါကာ တိဿမထရျေအား အဆုံးစီရငျရနျ စရံငှမြေားပေးခကြော စခေိုငျးလသေညျ။ ရဟနျးသီလ စငျကွယျစှာဖွငျ့ တရားဘာဝနာ ရှုပှား နသေညျ့ တိဿမထရျေမွတျကို သတျဖွတျရနျ လူဆိုးကွီးငါးရာတို့လညျး တောသို့ သှားကွလသေညျ။
၅။ ကြောကျတုံးဖွငျ့ ပေါငျကို ခြိုးတျောမူသညျ
တိဿမထရျေရှိရာသို့ လူဆိုးကွီးမြား ရောကျလာသညျ့အခါ မထရျေက အဘယျကွောငျ့ ရောကျလာ သနညျးဟုမေးရာ လူဆိုးကွီးမြားကလညျး အရှငျဘုရား၏ ခယျမက စခေိုငျးခွငျးကွောငျ့ ယခုသတျဖွတျရနျ ရောကျလာခွငျး ဖွဈကွောငျး ပွော၏။ ထိုအခါ မထရျေမွတျသညျ လူဆိုးကွီးမြားအား မိမိအား ယနတေ့ဈည မသတျရနျ ပွောပွီး မိမိထှကျပွေးမညျမဟုတျကွောငျး သကျသထေားသညျ့အနဖွေငျ့ မိမိ၏ ပေါငျရိုးနှဈခြောငျးကို ကြောကျတုံးဖွငျ့ ထုခြိုးလေ၏။ ထိုအခါ လူဆိုးကွီးမြားလညျး စိတျခလြကျခဖြွငျ့ စွင်ျကံနျးလမျးတဈနရော၌ မီးဖို၍ အိပျကွလသေညျ။
မထရျေမွတျသညျ ပေါငျကြိုးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပျေါလာသညျ့ ဒုက်ခဝဒေနာကို ဖယျခှာ၍ မိမိ၏ ရဟနျး ဖွဈသညျမှ ယနတေို့ငျ စောငျ့ထိနျးလာခဲ့သညျ့ သီလ၏ အစှနျးအထငျးမရှိ စငျကွယျမှုကို ဆငျခွငျတျောမူသညျ့ အခါ နှဈသကျဝမျးမွောကျမှုပီတိမြား ဖွဈလာ၏။ ထို့နောကျ ဘုရားရှငျထံတျောပါးမှ သငျယူလာခဲ့သညျ့ ဝိပဿနာ တရားကို ပှားမြားရာ အရုဏျတကျခြိနျတှငျ အရဟတ်တဖိုလျသို့ရောကျကာ ရဟန်တာဖွဈတျောမူလသေညျ။
၆။ မဂ်ဂငျရှဈပါး၏ အမညျကှဲမြား
Middle way. = မဇ်ဇိမပဋိပဒါ အလယျလမျး
Noble practice = ဗွဟ်မစရိယ
Deathless path. = အမတဂါမိမဂ်ဂ
Ever truth. = သမ်မတ်တ
၇။ သမ်မာဒိဋ်ဌိ အမြိုးမြိုးရှိပါတယျ
၁- ကမ်မဿကထာ သမ်မာဒိဋ်ဌိ = ကံနှငျ့ ကံအကြိုးကို ကောငျးစှာသိမွငျတဲ့ဉာဏျ
၂- ဝိပဿနာသမ်မာဒိဋ်ဌိ = သခါင်္ရတရားတို့ရဲ့ မမွဲတဲ့သဘော မခိုငျခနျ့တဲ့သဘော အစိုးမရတဲ့ သဘောကို သိမွငျတဲ့ဉာဏျ
၃- သစ်စာနုလောမိကသမ်မာဒိဋ်ဌိ = သစ်စာလေးပါးအား လြှျောစှာသိမွငျတဲ့ဉာဏျအပွငျ ဈာနသမ်မာဒိဋ်ဌိ၊ မဂ်ဂသမ်မာဒိဋ်ဌိ၊ ဖလသမ်မာဒိဋ်ဌိ တှရှေိပါတယျ။
၈။ အတ်တဒိဋ်ဌိနှငျ့ သက်ကာယဒိဋ်ဌိ ကမ်မဿကတသမ်မာဒိဋ်ဌိ
အတ်တဒိဋ်ဌိသမားက မရှိတဲ့ ဝိညာဉျ လိပျပွာ အတ်တကို ရှိတယျလို့ ယူဆတယျ။ သိတာတော့ မဟုတျဘူး။ သင်ျခါရ တရားတှရေဲ့ သဘောအမှနျဖွဈတဲ့ ပျေါပွီးပြောကျ၊ ဖွဈပျေါလာပွီး ခြုပျနတေဲ့ မတညျတံ့ မခိုငျခံ့တဲ့ သဘောအမှနျကို ဝိပဿနာဉာဏျနှငျ့ သိမွငျ သဘောပေါကျလာတဲ့ ယောဂီက ဝိဉာဉျလိပျပွာ အတ်တကို မယူ တော့ဘူး။ သူသဘောပေါကျပွီ၊ သူသိသငျ့သလောကျ သိထားပွီ၊ ဒါကွောငျ့သူ အတ်တဒိဋ်ဌကကနေ တဒင်ျဂခငျြး လှနျမွောကျနပေါတယျ။
သက်ကာယဒိဋ်ဌိသမားက ထငျရှားရှိတဲ့ ကိုယျကောငျကွီးကို ငါ သူတဈပါး အဖွဈ ခံယူလေ့ ရှိပါတယျ။ ဒါက ပုထုဇဉျတှရေဲ့ မှေးရာပါ ဒိဋ်ဌိဖွဈပါတယျ။ ဝိပဿနာ တရားအဆငျ့အတနျး တဈခုကိုရောကျသှားရငျ ငါ သူတဈပါး ယောင်ျကြား မိနျးမ ဆိုတာ အပွောသင်ျကတေမြှသာ ဖွဈတယျ။ တကယျအမှနျ အရှိတရားက ရုပျနာမျအစုသာပဲ သဘောပေါကျလာသူအဖို့ သက်ကာယဒိဋ်ဌိ ကငျးစငျသှားပါတယျ။ လောကဝေါဟာရအရ ငါ သူတဈပါး အပွောကို တော့ ပွောနပေလေိမျ့မယျ ဒါက လောက သတျမှတျခကျြမြှသာ ဖွဈပတေယျဆိုတဲ့ အမှနျတရားကို နားလညျ လာသူအဖို့ သက်ကာယဒိဋ်ဌိကနေ လှတျမွောကျပါတယျ။ ကံနှငျ့ကံအကြိုးကို သိမွငျနားလညျလာတဲ့ သူတျော ကောငျးအဖို့ နတ်ထိကဒိဋ်ဌိ အဟတေုကဒိဋ်ဌိ အကိရိယဒိဋ်ဌိတှကေနေ လှနျမွောကျပါတယျ။
၉။ မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိလညျး မဂ်ဂငျထိုကျတယျ
သမ်မာဒိဋ်ဌိ၊ သမ်မာသင်ျကပ်ပ၊ သမ်မာဝါယမ၊ သမ်မာသတိ၊ သမ်မာသမာဓိ တှကေ တရားအားထုတျရာမှာ ပါရမယျ။ သမ်မာဒိဋ်ဌိလား၊ သမ်မာသင်ျကပ်ပလား၊ သမ်မာဝါယမလား၊ သမ်မာသတိလား၊ သမ်မာသမာဓိလားဆိုတာ စာနှငျ့ မသိသူ ဖွဈစေ တရားအားထုတျတဲ့ လမျးကွောငျးမှနျနရေငျ ဒီ မဂ်ဂငျ ၅-ပါးက ပါတယျ။ သီလဝိသုဒ်ဓိက ကနဦးဖွဈပွီးသားမို့ သီလမဂ်ဂငျကို မပွသျောလညျး ပါပွီးသား ဖွဈပါတယျ။ သစ်စာလေးပါးသိဖို့ မဂ်ဂငျရှဈပါးလုံး လိုပါတယျ။ မိစ်ဆာ ဒိဋ်ဌိကလညျး မဂ်ဂငျထိုကျပါတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ အပါယျဘုံကိုသှားရာ လမျးကွောငျးဖွဈလို့ပါပဲ။
၁၀။ ပဋ်ဌာနျးထဲက မဂ်ဂပစ်စညျးမှာ သမ်မာနှငျ့ မိစ်ဆာရှိ
ပဋ်ဌာနျးမှာလာတဲ့ မဂ်ဂပစ်စယောကို သာမာနျအားဖွငျ့ ယူရိုး ယူစဉျ မဂ်ဂငျးရှဈပါး မယူရပါဘူး။ မဂ်ဂငျရှဈပါးက နိဗ်ဗာနျကို သှားတဲ့လမျး။ ပဋ်ဌာနျးထဲက မဂ်ဂက နိဗ်ဗာနျ အပါအဝငျ သုဂတိဋ်ဌာန သှားတဲ့လမျးရှိတယျ၊ ဒုဂ်ဂတိဋ်ဌာနကို သှားတဲ့ လမျးလညျးရှိတယျ။
မဂ်ဂသမ်ပယုတ်တကာနံ ဓမ်မာနံ တံသမုဋ်ဌာနာနဉ်စ ရူပါနံ မဂ်ဂပစ်စယနေ ပစ်စယော။
အဲဒီ သဘာဝတရားတှကေ လမျးကွောငျး အနနှေငျ့ဖွဈပွီး သူတို့နှငျ့ ယှဉျတှဲလာတဲ့ သဘာဝတရားတှကေိုလညျး သူတို့နညျးတူ ဖွဈဖို့ရာ ကြေးဇူးပွုတယျ။ ဖွဈစတေယျ။ ဥပမာပွရရငျ မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိ wrong understood ကသူနှငျ့ယှဉျတှဲဖွဈတဲ့ စိတျ စတေသိကျ စိတ်တဇရုပျ အားလုံးကို မှားယှငျးတဲ့ လမျးကွောငျးပျေါကို တငျပေးလိုကျ တယျ။ ဒါကွောငျ့ တှေးရငျလညျး တဈလှဲ၊ ပွောရငျလညျး တဈလှဲ၊ လုပျရငျလညျး တဈလှဲ ဖွဈသှားတယျ။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုရငျ မိစ်ဆာဒိဋ်ဌိက ကြေးဇူးပွုလို့ပါ။ ကောငျးတဲ့ဘကျကလညျး အခုအတိုငျးပဲ တှရေ့ပါမယျ။ သမ်မာဒိဋ်ဌိ Right understood ဖွဈပွီဆိုတာနှငျ့အတှေးမှနျပွီ သမ်မာသင်ျကပ်ပ၊ အပွောမှနျပွီ အလုပျမှနျပွီ သမ်မာပဋ်ဌာနျ လုံလဝီရိယ မှနျပွီ စူးစိုကျမှုမှနျပွီဒါကိုသမ်မာဒိဋ်ဌိက ကြေးဇူးပွုတာပါ။ (ကမျြးညှနျး ပါခြုပျဆရာတျော ပဋ်ဌာနျး)
မဂ်ဂပစ်စညျးရဲ့ သင်ျခြာ သတ်တ ဖွဈတဲ့အတှကျ ဟတေု၊ အာဟာရ၊ ကမ်မ၊ ဣန်ွဒိယ နှငျ့ ဈာနပစ်စညျးတို့နှငျ့ သင်ျခြာ တူပါတယျ။
မဂ်ဂအဓိပ်ပါယျက “ကိလသေေ မာရန်ေတော နိဗ်ဗာနံ ဂစ်ဆတီတိ မဂ်ဂေါ” လောဘ ဒေါသ ကိလသောကို သတျပွီး နိဗ်ဗာနျကို သှားတတျလို့ မဂ်ဂမညျပါတယျ။
“သီလပရိဘာဝိတော သမာဓိ မဟပ်ဖလော ဟောတိ မဟာနိသံသော” သီလကိုအခွခေံပွီး ပှားမြားတဲ့ သမာဓိ အကငျြ့သညျသာလြှငျ အကြိုးအာနိသငျ စှမျးရညျ ထကျမွကျတယျ။
သီလ သမာဓိ ပညာက ပဋိပတ်တိကမ်မပညာ သီလ သမာဓိက ဒသေနာက်ကမ ဖွဈပါတယျ။